Mushure memakore akati wandei, iyo Beta R1 vhezheni yeHaiku OS inoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Haiku ndizvo yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu parizvino mukuvandudza izvo inotarisa zvakanyanya pamunhu komputa uye multimedia.
Akafuridzirwa neBeOS (Iva Unoshanda Sisitimu), Haiku inoshuvira kuve inokurumidza, inoshanda, mushandisi-inoshamwaridzika uye nyore-kudzidza system, Pasina kuregeredza simba rayo kune vashandisi veese matanho. Iyo Haiku projekiti inozivikanwa nezve zvainoda maererano nehunhu hwenhepfenyuro shanduro.
Kusvikira 2009, hapana vhezheni yakanyorwa yaiwanikwa yekurodha pasi, kuitira kudzora kupinda kune vanhu vakashinga zvakakwana kuumbiridza iyo system pachayo uye kudzivirira kunoodza vashandisi vasina ruzivo rwakakosha kuti vadaro.
1 Nezve iyo nyowani beta ye (Haiku)
1.1 WebPositive inogadziridza
1.3 Kuvandudzwa kwekuita
Nezve iyo nyowani beta ye (Haiku)
Mushure menguva refu musina vhezheni yakaburitswa (iyo yekupedzisira alpha vhezheni yakabva muna 2012),vhezheni ye beta ichangoburitswa!
Iyo R1 vhezheni yeHaiku inotsanangurwa se'inotsiva BeOS R5, yakakwana uye inoshanda ». Kubva ipapo, tinotsanangura beta shanduro: "maficha ese aripo, asi kuchine zvimwe zvipenga."
Uye iyo alpha vhezheni: "iyo sisitimu inokwanisa kuzvinyora pachayo, saka zvinokwanisika kuishandisa kanenge kuenderera kumberi" (zvakada kufanana ne "zvishoma zvinogoneka chigadzirwa" pfungwa yatinonzwa nezvayo nhasi).
Kuuya kweiyo beta vhezheni saka idanho rakakosha muhupenyu hweprojekti. Zvinoreva kuti iyo system haichadi mabasa matsva, uye danho rinotevera ndere kugadzirisa zvikanganiso zvasara uye kudzikamisa iyo system kusvika kuR1.
Idzi ndidzo nhau huru mune ino beta. Izvozvi zvave kugona kuisa mashandisirwo zviri nyore kwazvo, kungave kushandisa rairo yekuraira kana kuburikidza neiyo yakajeka HaikuDepot application, iyo zvakare inobvumidza iwe kuti uone mamwe mafoto ekuratidzira uye makomendi uye mavhoti evamwe vashandisi.
Iyo dhizaini yeiyo package manejimendi system ndeyekuvandudzaPanzvimbo pekuburitsa mafaera kubva mupakeji panguva yekumisikidza, pasuru yacho yakaiswa pane chaiyo faira sisitimu yekuburitsa mafaera kune zvinoshandiswa.
Semagumo, hapana chikonzero chekutevera mafaera akaiswa neimwe pasuru, saka kumisikidza uye kusabvisa zvinoitika ipapo ipapo.
Iyo WebPositive browser inoshandisa vhezheni itsva yeWebKit ine zvakawanda zvinogadzirisa uye zvitsva. Pakati pezvimwe zvinhu, zvinokwanisika kutamba YouTube mavhidhiyo. Iwe zvakare unoziva nzira yekufamba naGopher, kuwedzera kune HTTP.
Izvo zvinokwanisika kubatanidza michina miviri inomhanya Haiku uye kudzosera kuratidzwa kwekushandisa kubva kune mumwe kuenda kune mumwe.
Izvi zvinoitwa mukupa mirairo pakati pekushandisa uye giraidhi yemifananidzo. Naizvozvo, musimboti pane kushomeka kwekushomeka kwedatha pakati pemachina maviri, kunze kwekunge chishandiso chakanyatso dhizaina data re bitmap mairi rinokumbirawo giraidhi yemifananidzo kuti itore.
Iyo programmer yakanyorwazve kunyorwa. Haiku ikozvino inokwanisa kushandisa vanopfuura vasere mapurosesa (muganho wakaiswa neBeOS API, saka maapplication ekare asina kugadziriswa anongoona yekutanga yekutanga).
Iyo itsva scheduler inoziva cache uye processor topology uye inoshandisa iyi ruzivo kurongedza tambo kuti dzimhanye pane kernel iyo inogona kunge yatochengeta iyo inodiwa data.
Haiku ikozvino ine 64-bit vhezheni iyo inotora mukana weanogona eanhasi mapurosesa. Nekudaro, izvo hazvigoneke kumhanyisa 32-bit kunyorera pane 64-bit system (Basa iri rakafambira mberi, asi harigone kuverengerwa munguva ye beta1, ichave iri mune yeramangwana vhezheni.)
Kazhinji, akati wandei masisitimu ehurongwa akagadziridzwa kuti ave anoteerera: memcpy uye memset mashandiro, kumwe kunyanya kushanda kusingagadziriswe pane giraidhi server (semuenzaniso kudimbura nechimiro chekupokana).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mushure memakore akati wandei, iyo Beta R1 vhezheni yeHaiku OS inosunungurwa
inobata pfungwa dzangu